काठमाडौं - रंग अबिर या लोला खेल्दै हुनुहुन्छ ? सचेत हुनुहोस्, आफूले प्रयोग गरेका रंग या अबिरले कतै हानि नपुर्याओस् । होलीमा खेलिने रंगमा रासायनिक विषाक्त पदार्थ हुने भएकाले आँखा र छाला बचाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार यस्ता रंग तथा अबिरले छालालाई नोक्सान गर्नुको साथै आँखालगायत संवेदनशिल अंगमा असर पुर्याउँछन् । ‘वर्सेनि होलीमा आँखाभित्र रंग अबिर गएर वा लोला आदिले चोट लागेर दृष्टिमा क्षति पुगेको पाइन्छ’, तीन दशकदेखि आँखाको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. डीएन साहले भने, ‘आँखामा रंग, अबिर पर्दा या लोला आदिले प्रहार हुँदा रासायनिक र यान्त्रिक चोट लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।’
कसैकसैले ढल, नालीको पानी, डढेको मोबिल, ग्रिज प्रयोग गर्दछन्, यो झनै जोखिमपूर्ण हो । रंगमा थुप्रै मात्रामा वाइल कलर, केमिकल डाई, विषाक्त पदार्थ, र नोक्सानी पुर्याउने तत्व हुन्छन् ।
‘रासायनिक रंगलगायतको उपयोगबाट छाला स्वास्थ्यका लागि सकारात्क मानिँदैन, बजारमा पाइने रंगमा माटो, चुन, सिसा, अभ्रख, मर्करी, विभिन्न रसायनलगायत हानिकारक तत्त्व मिसिएको हुन्छ’, धुलिखेल अस्पतालका छोला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्णले भने । रसायनयुक्त रंगले छालाको एलर्जी हुन्छ । चिलाउनुका साथै घाउसमेत हुनसक्छ ।
नख्खु कारागारमा आलमको माग : डिल्लीबजार लैजाऊ, कोठा र शौचालय...
झनक्क रिस उठ्छ ? यसरी गर्नुस् सामाधान